दाइ होइन, रातो खुर्सानी हिरो ! - Entertainment Khabar
दाइ होइन, रातो खुर्सानी हिरो !
खुर्सानी पिरो छ, हाम्रो दाजु गज्जबको हिरो छ । भन्ने नेपाली लोकलयमा प्रचलित गितले खुर्सानी भन्दा बढ्ता दाइलाई फुर्काएको छ । तर अब दाइको भन्दा खुर्सानिको महत्व धेरै भएको कुरा पछिल्ला अध्ययनहरुले देखाएका छन् । खतराजन्य रोग हृदयघात देखि अन्य विभिन्न स–साना रोगहरुबाट समेत बचाउने काम रातो खुर्सानीबाट हुने कुरा जानकारीमा आएका छन् ।
दुखाई, चोट र शारीरिक समस्याको लागि घरेलु उपचार खुर्सानीबाटै सम्भव छ । सामान्यत प्राथमिक उपचारका लागि घरभित्रै पाइने विभिन्न खाद्य पदार्थ र अन्य चीजहरुको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । त्यसै मध्येको एक रातो खुर्सानी हो । भर्खरै गरिएको एउटा अध्ययनले रातो खुर्सानीको सेवनले हृदयघातलाई रोक्न सक्छ भन्ने थाहा लागेको छ ।
यसैगरी, रातो खुर्सानीका अन्य फाइदाहरु छन् ।